मेरी लुखुरी - मन पौडेल - साहित्य नेपालसाहित्य नेपाल मेरी लुखुरी - मन पौडेल - साहित्य नेपाल
मेरी लुखुरी – मन पौडेल
नयाँ बिहे गरेको, साथीभाईहरूले खान बोलाउन थाले । धेरैलाई टारेँ तर एउटा भोजमा नगई भएन । लुखुरीलाई पनि लिएर गएँ । मनमनै डर लागिरहेको थियो, के चर्तिकला देखाउने हो यसले आज भनेर । काठमान्डूको भोजभत्तेर कहिले देखेको भए पो । त्यसैले एउटा साथीकी दुलहीलाई जिम्मा लगाइदिएँ र ढुक्कको सास लिएँ । सब खाइरहेका थिए, उनी पनि हातमा प्लेट लिएर खाइरहेकी थिइन, जसोतसो गरेर । अचानक हलको पल्लो कुनाबाट उनी “हजुर हजुर” भनेर चिच्याउन थालिन् । सबैको ध्यान उनीतिरै आकृष्ट भयो । मेरो मुटुचाहिँ अब के उपद्रो गर्न थालिन् यिनले भनेर जोडजोडले धडकिन थाल्यो ।
मैले के भो भनेर उनीतिर हेरँे , हेर्नै पर्यो । उनको हातमा थियो न्यापकिन । त्यहि न्यापकिन बेस्सन हल्लाएर उनी सोधिरहेकी थिइन् “हजुर ! यो के गर्ने ? यो पनि खाने हो ?”
लुखुरीको चर्तिकला कति बयान गरुँ । एकपटक एउटी दिदी पर्नेले बुहारीलाई लिएर आइज कि आइज भनेर साह्रै कराउनु भो जति टारे पनि टार्न सकिँन । “आज दिदीकहाँ जानु पर्छ, कोरीबाटी लुगा फेरेर बस्नु” भनेर अह्राएर हिँडे । पछि जाने बेलामा डेरामा आउँछु त लुखुरी त रामै्रसँग सिङ्गारपटार पारेर पो बसेकी रहिछन् । ठ्याम्मै मधेशतिर लोग्नेमान्छे आइमाई बनेर नाच्ने नटुवाजस्ती । मुख सेताम्मै, कमेरो दलेकोजस्तो । गालामा के दलेको हो, राताम्मै । ओठभरि त लिपिस्टिक लाएको हो कि के हो, जताततै पोतरेकोजस्तो । कपालमा हालेको तेल कन्चटमा चुहिरहेको थियो । त्यसमाथि बनारसी साडी । लुखुरी त सिङ्गारपटार गरेकी बाँदर्नीजस्ती देखिरहेकी थिई । त्यसमाथि मोटो न मोटो कोस तानेर लाएको गाजलले त झन् बौसी जस्तै लागिरहेकी थिई मेरी लुखुरी । म त तिनको रूप देखेर नहाँस्नै सकेँ न रुनै । उल्टो बरु आफ्नो कान समातेँ र तिनको आधुनिक भयङ्कर मेकअप पखाल्न लगाएर घरमै थच्चिएँ, दिदीकहाँ गइन ।
जब मैले स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेँ, लुखुरी साह्रै दङ्ग परिन् । मन्दिर गइन्, भाकलको लड्डु चढाइन् र मलाई लड्डु खवाउँदै विस्तारै भनिन् “मैले पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो ” म दङ्ग परेँ ।
105 Readers have read this post.